​Sida aad u qaadid HIV/AIDS ?
Thursday February 23, 2017 - 16:07:36 in Articles by Abdi Hared
Waagacusub.net - Maxay yahiin dhecaanka jirka ee laga helo HIV?
HIV waa firus ku nool dhiigga iyo dhecaanada kale ee ku jira jirka. In dheecaankaan laga wareejiyo hal qof loona wareejiyo qof kale waxay sababi kartaa cudur. HIV waxaa lagu faafin karaa saddax siyaabo oo muhiim ah – xariirka galmada, kala qaadashada cirbadaha, iyo hooyada oo gudbisa cunugga inta ay xaamilada tahay, ama naas nuujinta.
Dheecaanka la ogsoon yahay in laga helo qiyaas badan oo HIV ah waxaa ka mid ah:
- Dhiigga Dhecaanka siilka
- Biyaha ragga Dhecaanka dabada
- Caanaha naaska
- Qiyaas yar oo HIV ah waxaa laga helay
- ilinta, cantuufta, iyo kaadida, laakin
- dhecaanadaan LAGUMA arkin in ay
- faafiyaan cudurka HIV.
HIV LAGUMA arkin dhididka aadanaha.
Waxaa dhici karto in shaqaalaha xanaanada caafimaadka la kulmaan dhecaano kale oo ku jira jirka laguna arko qiyaas badan oo HIV ah, sida:
- Dhecaanka Amniotic – laga helo saxarada waqtiyada uurka
- Dhecaanka Cerebrospinal – laga helo maskaxda iyo laf dhabarka
- Dhecaanka Synovial – laga helo meesha xibnaha lafaha iska galaan
Sidee ayay HIV ugu faaftaa dhecaanka jirka?
Saddax siyaabo waweyn ayay HIV ugu faaftaa jirka:
- Xariirka galmada
- Uurka, dhalmada cunugga ama naas nuujinta
- Cirbadaha loo adeegsado mukhadaraadka
Inta ay socoto galmada – HIV wuxuu ku faafaa derbiyada siilka, guska, dabada, ama afka. Marka la sameeyo galmada siilka, afka, ama dabada, waxaa dhici karto in derbiyada meelahaan soo gaaro dhaawac,taasoo u ogolaneyso HIVda gasho dhiigga qofka. Badanaa, dhaawacaan lama ogaado.
Cudurada laga qaado galmada (STDyada) sida "chlarmydia” iyo jabtada, waxay sababaan in jajab yaryar ku yimaado derbigasiilka, afka, dabada, iyo guska. Tan waxay HIVda u ogolaataa in ay gasho dhiigga.
Marka la soo qaado cudurada STD kuwasoo keena nabaro furan (sida cununka "herbes” ama sfiilatada), HIVda waxay ka geli kartaa nabarada.
Waqtiyada uurka, dhalmada cunugga (marka cunugga ka soo baxaayo hoosta dhalmada), ama naas nuujinta – HIV waxay ku faaftaa cudurka ku jira dhiigga ama caanaha la nuugo. (Tan waxaa loo yaqaan gudbinta hooyada-ilaa-cunugga).
Natiijada ka dhallata marka mukhadaraadka loo adeegsado cirbadaha
– HIV waxay ku faaftaa marka la wadaago cirbadaha iyo "hawlaha” (tusaale kariyaha,qaadada, daboolka dhallada, filtarada suufka,biyaha) ee ku wasaaqoobi kara dhiigga cudurka qaba.
AAD ayay u yar tahay in HIV ku faafto:
- Marka qofka lagu shubo dhiig cudur qaba.
- Shaqada (badanaa shaqaalaha xanaanada caafimaadka ee xariir la sameeya dhiig cudur qaba ama dhecaano kale).
Marka xibin jirka lagu talaalo qof Hubso in aad jawaab u heshid su’aalaha aad ka qabtid HIV/AIDS.
N.B Waaxdaada xanaanada caafimaadka dadweynaha iyo bixiyahaada xanaanada caafimaadka ayaa ku siin kara kaalmo.
Waxaa idiin soo gudbiyay
Abdullahi hashi farah